Filoham-pirenena maro no efa nifandimby nitondra an'i MADAGASIKARA kanefa mbola tsy nisy nahavita izay vitan'izy efatra mirahalahy ireto: fampitambarana sy fampihavanana ny vahoaka malagasy rehetra. Tsy eo an'ivon'ny nosy ihany fa eran-tany mihitsy .
Tsy basy na tafondro no fitaovam-piadiana ampiasan-dRAHERY (gasy.net) sy Mr BLOU D'ALASORA (sary.fr) fa fakan-katsary. Tsy sanatria hakana ny fo na hakana ny fanahin' ny vahoaka fa anehoana hatrany kosa ny fijoroan'ny Malagasy amin'ny maha izy azy eo amin'ny sehatry ny kanto eran-tany.
Toy izany koa, ny fahaizana manokana eo amin'ny Teknôlojia infôrmatika mampiavaka an'i DINAS (gasykamanja.com) sy i HERY (serasera.org) dia tsy nampiasany hanamboarana baomba atômika vaovao fa natolony ny mpiray tanin-drazana mba hampihaonana indray ny mpinamana sy mpihavana nosarahin'ny fitadiavana sy ny elanelan-tany.
Ka teny tsotra no amaranako azy:
ALEO IREO BANDY IREO NO HITONDRA NY TANY SY NY FANJAKANA.